CC Warsame oo weerar afka ah ku qaaday Qoor-Qoor iyo Guudlaawe | KEYDMEDIA ONLINE
CC Warsame oo weerar afka ah ku qaaday Qoor-Qoor iyo Guudlaawe
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa weerar afka ah ku qaaday Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, wuxuuna si cad u sheegay in uusan jirin wax kulan ah oo lala yeelanayo Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa gaashaanka u duruuray fariin ay Madaxweynayaasha Maamul goboleedyada Galmudug iyo HirShabeelle, ka soo qaadeen Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo, taas oo ah in Murashixiintu la kulmaan, si looga doodo muddo kordhinta.
Inkstoo kulan xalay dhacay lagu gorfeeyay arrintaan laguna kala tagay, haddana CCWarsame, ayaa war uu ka soo saaray ku yiri, “Farmaajo isagaa irdaha u soo xiray wadahadaladii doorashooyinka, ka dibna hoggaamiye kooxeed noqday. Ma jirto cid xiisa u qabta la kulankiisa.”
Dhanka kale Warsame, wuxuu su’aal galiyay waxa sababbay in go’aanka taageerada muddo kordhinta ay kaligood gaaran, Qoorqoor, Laftagareen iyo Guudlaawe, iyadoo la ogyahay in Maamullada kale ay Bulshada rayadka iyo wax garadka la tashteen.
“Dowlad Goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed yey la tashadeen markii ay go’aanka muddo kororsiga Farmaajo ku taageereen? bulsho rayad, waxgarad, Gole Wasiiro iyo Baarlamaan ma lahan miyaa? Mise dadkoodeey ka arkeen oo go’aanka iyagaa jeebka ku sita? Ninka dulmiga wada iyo kan u suura geliya kalama sokeeyaan.”Ayuu yiri Warsame.
CCWarsame, ayaa isaga baxay Kulan xalay dhex maray Midowga Musharixiinta iyo Madaxweynayaasha Galmudug iyo HirShabeelle, kadib markii Qoorqoor iyo Guudlaawe, ay si cad uga baxeen ballan ay galeen labo maalin ka hor.
Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa ku gacan seyray farriinta uu Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo u soo dhiibay Qoorqoor iyo Guudlaawe, taas oo ah mid aan xilligaan loo baahneyn.